TOOS u daawo codeynta doorashada madaxweynaha oo wareegga labaad la galay - Caasimada Online
Home Warar TOOS u daawo codeynta doorashada madaxweynaha oo wareegga labaad la galay
TOOS u daawo codeynta doorashada madaxweynaha oo wareegga labaad la galay
Muqdisho (Caasimada Online) – Codeynta doorashada madaxweynaha Soomaaliya ayaa ka billaabatay Teendhahda Afisyoone ee magaalada Muqdisho, ayada oo ay u tartamayaan in ka badan 34 musharax.
Waxaa musharaxiinta ka mid ah madaxweynaha xilka haya Maxamed Cabdullaahe Farmaajo iyo madaxweynayaal hore Xasan Sheekh Maxamuud iyo Shariif Sheekh Axmed.
Guddoomiyaha guddiga qaban-qaabada doorashada ayaa goordhoweyd shaaciyay inay ka hareen tartanka Musharaxiinta kala ah Jabriil Ibrahim Cabdulle iyo Xuseen Cabdi Nuunow. Sidoo kale waxa tartanka doorashada madaxweynaha hore uga haray Cabdikariin Xuseen Guuleed, Dahir Maxamuud Geele iyo Cabdinaasir Cabdulle.
Guddoonka Golaha Shacabka ayaa furay doorashada, isaga oo sheegay inay joogaan 329 xildhibaan oo isugu jiray xubnaha Golaha Shacabka iyo kuwa Aqalka Sare.
Wareegga labaad ee doorashada ayaa waxaa u gudbaya afarta musharax ee ugu codadka badan. Haddii musharaxa afaraad iyo shanaad ay isku cod noqdaan, waxay labaduba u gudbayaan wareegga labaad.
Ciidamada Midowga Afrika ee qeybta ka ah howlgalka ATMIS, ayaa sugaya amniga goobta ay doorashadu ka dhaceyso, waxaana caawinaya ciidamada booliska Soomaaliya.
Codeyntan oo dib u dhacday muddo ka badan sanad sababo la xiriira khilaafaad siyaasadeed ayay qasab ahayd in la qabto bishan si ay u sii soocto lacag dhan 400 milyan oo dollaar oo sanduuqa lacagta adduunka ee IMF uu siiyo dowladda Soomaaliya.